“के तपाई विमा अभिकर्ता बनेर काम गर्न चाहनु हुन्छ? विमा बाट करोड पति बनेकाहरुको कथा हेर्नुस्।:: Mero Desh
“के तपाई विमा अभिकर्ता बनेर काम गर्न चाहनु हुन्छ? विमा बाट करोड पति बनेकाहरुको कथा हेर्नुस्।
Published on: २८ आश्विन २०७८, बिहीबार ०२:२९
के तपाई विमा अभिकर्ता बनेर काम गर्न चाहनु हुन्छ? विमा बाट करोड पति बनेकाहरुको कथा हेर्नुस्।साच्चिकै तपाईमा त्यो किसिमको भोक छ के तपाई मनै देखि काम गरिरहनु भएको छ आज हामीले विमा अभिकर्ता कसरी सफल बन्न
सक्छ र कसरि सफल कामहरु गर्न सक्छन भन्ने टिप्सहरु दिए का छौ यदि तपाईहरु काम गर्न चाहनुहुुन्छ र राम्रो विमा कम्पनी खोजिरहनु भएको छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस हामी तपाईको लागि पुल बन्दिने काम गर्ने छ। कल गर्नको लागि पनि lovemerodesh@ gmail.com मा ईमेल गर्नुहोस्। र थप जानकारी लिनुहोस्।
अब केहि टिप्सहरु:जीवन बीमा व्यवसायमा अभिकर्ताहरुको ठूलो योगदान रहेको हुन्छ । अभिकर्ता बन्न चाहाने वा बनेकाहरु सबै सफल नहुन पनि सक्छन् । तर सफल अभिकर्ता बन्नको ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरु हुन्छन् जसलाई हरेक अभिकर्ताले
पालना गरेमा सफल अभिकर्ता बन्न सकिन्छ । सफल बीमा अभिकर्ता बन्ने १० टिप्स् १. हरेक दिन नयाँ नयाँ साथि हरु बनाउने २. हरेक दिन कम्ती ३ जना सम्मलाई भेट्ने सयम निकाल्ने
३. कहिल्यै पनि फोनवाटै बीमा पोलिसी बेच्ने प्रयास नगर्ने
४. ग्राहकलाई सधै घरमै भेट्ने, पसल वा कार्यलयमा कहिल्यै भेट्न जानुहुदैन ।५. एक सफल व्यवसायीको जस्तो ब्यवहार गर्ने, जो कोहि पनि सफल व्यक्तिसंगको संगत मन पराउछन ।
६.संभावित ग्राहकहरु को घरमा जादा पनि त्यतिकै नजानुहोस्, आवश्यक कागजपत्र सहित जानुपर्दछ ।७. अभिकर्ता ग्राहक संग सुरुमा धेरै नबोल्ने, ग्राहकको जिज्ञास भएपछि राम्रोसंग बुझाउने ।
८. बीमा संम्झौता गर्दा धेरै प्रिमियमको माग पनि गर्नु पर्दछ ।र
९. कहिल्यै पनि बीमाधन बेच्नु हुदैन्, बरु धेरै प्रिमियम बेच्नुपर्छ त्यो पनि दैनिक ।
१०. ग्राहकले सम्पर्क गर्न खोज्दा जहिले पनि सम्पर्कमा रहिरहनु पर्दछ । अभिकर्ता सदैब इमन्दार हुनुपर्दछ । तपाई सफलताको कथा हेर्न चाहनु हुन्छ भने सिधै सुरुभएको १२ मिनेट अथवा पुरै भिडियो पनि हेर्न सक्नु हुनेछ।